Hevitra 3 hanamboarana voninkazo ho an'ny CRAFTS | Asa tanana
DonluMusical | | Decor, Asa tanana an-trano
Ny voninkazo dia singa iray tena ilaina amin'ny asa asa tanana maro. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao VONDRON-DALANA 3 TSY MISY mba hahafahanao handravaka ny tetikasanao sy hanome azy ireo fikitika tena izy.
1 Fitaovana hanaovana voninkazo taratasy
2 Fomba fanao fanaovana voninkazo taratasy
3 ATAON'NY FAMINTINANA STEP
3.1 VONDRONA 1
3.2 VONDRONA 2
3.3 VONDRONA 3
Fitaovana hanaovana voninkazo taratasy
Fiozy na taratasy miloko
Fomba fanao fanaovana voninkazo taratasy
Amin'ity horonantsary ity dia azonao jerena amin'ny antsipiriany ny fomba fanaovana ireo Karazana voninkazo 3 ho an'ny hevitrao. Azonao atao ny manambatra loko isan-karazany ary mamorona fitambarana hafa tanteraka ho an'ny fety, fankalazana, sns ...
ATAON'NY FAMINTINANA STEP
Hetezo ny fo taratasy misy habe roa.
Hetezo faribolana boribory eva.
Manaova sary boribory roa ao anatiny.
Ampidiro ny aty ivelany any ivelany ary ny kely ao anatiny.
Apetraho eo afovoany ny tsipika iray mihorona miaraka amin'ny fanapahana mavo.
Manaova takelaka vitsivitsy ary apetaho avy ao aoriana.
Hetezo kofehin-kofehy eva.
Manintona onja amin'ny pensilihazo ianao.
Hetezo ary ahodino ity sombin-javatra ity.
Mametaka lakaoly amin'ny faran'ny farany hanidiana azy.
Lakaoly amin'ny taho sy ravina sasany.
Maneteza faribolana taratasy iray miaraka amin'ny fanampian'ny CD.
Hetezo ho boribory boribory io faribolana io, azonao atao ny mampiasa hety bika.
Atsofohy ilay sombin-kazo ary afatory ny farany.
Apetraho eo afovoany ny pom pom.
Mametraha ravina ao aoriana.
Ary hatreto dia ny hevitra androany, manantena aho fa tianao be izy ireo. Raha izany dia aza adino ny mizara azy ireo amin'ny olona bebe kokoa mba hahafahan'izy ireo mianatra azy ireo koa. Hihaona tsy ho ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa tanana an-trano » Hevitra 3 hanamboarana voninkazo ho an'ny CRAFTS-nao
Box voaravaka ho an'ny Andron'ny mpifankatia